အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့ ဖြတ်သန်းရလို့ ပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ အိမ့်ချစ် – Let Pan Daily
အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့ ဖြတ်သန်းရလို့ ပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ အိမ့်ချစ်
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်ကတော့ သူရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ရွှေလက်တွဲပြီး ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နေခဲ့တာပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ ဒီနေ့ မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အိမ့်ချစ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက်ကိုတော့ အိမ့်ချစ်က “Happy Birthday To Me. ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးကတော့ ဗိုက်ထဲမှာ မီးမီးလေးနဲ့ပေါ့။ ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာသမီးလေးရှိနေပြီဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တော့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရတယ်မေမေ့သမီးလေးရေ မေမေ့ရဲ့ကိုယ်ပွါးလေးဖြစ်လာမယ့်သမီးလေးက မေမေ့အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါပဲ မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကလဲ သမီးလေး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့မွေးဖွားလာဖို့ပါပဲ ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းအနေနဲ့ ရင်သွေးလေးကို ကျန်းကျန်းမာမာမွေးဖွားနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းထားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက အိမ့်ချစ်ကို ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အိမ့်ချစ်ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေး ခဲ့ကြပါဦးနော်။ ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်ရဲ့ ရင်သွေးလေးကတော့ မီးမီးလေးပါတဲ့နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ သူရဲ႕ ခင္ပြန္းနဲ႔ေ႐ႊလက္တြဲၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝေလးနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေနခဲ့တာပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိၿပီးသားျဖစ္မွာပါေနာ္။ ဒီေန႔ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔ေလးအတြက္ကိုေတာ့ အိမ့္ခ်စ္က “Happy Birthday To Me. ဒီႏွစ္ေမြးေန႔ေလးကေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ မီးမီးေလးနဲ႔ေပါ့။ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔မွာသမီးေလးရွိေနၿပီဆိုတဲ့အေတြးေလးနဲ႔ေတာ့ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ရတယ္ေမေမ့သမီးေလးေရ ေမေမ့ရဲ႕ကိုယ္ပြါးေလးျဖစ္လာမယ့္သမီးေလးက ေမေမ့အတြက္အေကာင္းဆုံးေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေလးပါပဲ ေမေမ့ရဲ႕ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေလးကလဲ သမီးေလး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ေမြးဖြားလာဖို႔ပါပဲ ” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာင္းအေနနဲ႔ ရင္ေသြးေလးကို က်န္းက်န္းမာမာေမြးဖြားႏိုင္ေစဖို႔ ဆုေတာင္းထားခဲ့ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေတြထဲက အိမ့္ခ်စ္ကို ခ်စ္ၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြလည္း အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးအတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပး ခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ ရင္ေသြးေလးကေတာ့ မီးမီးေလးပါတဲ့ေနာ္။
ဖြူးဖွေးနုဥ နေတဲ့ ရင်သားအလှ ပေါ်လွင်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေတဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ပုံရိပ်များ